Magacyada xildhibaanada maanta soo baxay iyo beelaha ay kasoo jeedaan + Sawirro - Idman news
Kismaayo (Caasimada Online) – Magaallo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dowlad goboleedka Jubbaland.
Doorashada oo lagu horreysiiyey kursiga HOP114 ayaa waxaa ku tartamay laba musharrax oo kala ah Cumar Ibraahim Xaashi iyo Cabdi Aadan Cabdullaahi, waxaana kusoo baxay Cumar Ibraahim Xaashi, sida uu shaaca ka qaaday guddiga doorashada Jubbaland.
Cumar ayaa helay 80 cod, halka musharixii la tartamayey uu isna helay 12 cod, sidoo kale waxaa halaabay 8 cod sida uu sheegay gudiga doorashada Jubaland oo natiijada shaaciyey. Cumar wuxuu kasoo jeedaa jeedaa Daarood/Ogaadeen/Bahgari.
Kursiga labaad HOP107 ee doorashadiisa la qabtay waxaa kusoo baxay Mudane Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartami lahaa. Maxamed wuxuu kasoo jeedaa Daarood/Jidwaaq/Bartire.
Sidoo kale kursiga HOP120 ayaa waxaa loo doortay Asad Cabdirisaaq Maxamed oo helay 77 Cod, halka Siciid Cabdiqaadir Shugri oo la tartamayey uu isna helay 18 cod. Asad wuxuu kasoo jeedaa beesha Dir/Layiile Cali/Reer Aw-saciid.
Sidoo kale, Xildhibaan Cabaas Cali Ibraahim ayaa ku guuleystay kursiga HOP111. Wuxuu helay 79 cod, halka Aadan Mursal Cadow oo la tartamayey uu helay 17 cod. Cabaas wuxuu kasoo jeedaa Jareerweyne/Shambara.
Cabdinuur Cali Aadan ayaa isna qaab gacan taag ah ugu guuleystay kursiga HOP028 ee Golaha Shacabka JFS, kadib markii uu tanaasulay Axmed Cabdi Maxameed oo la tartamayey. Cabdinuur wuxuu kasoo jeedaa Hawiye/Gaaljecel/Doqondiide.
Dr. Siciid Maxamed Cali ayaa isna ku guuleystay kursiga HOP093. Wuxuu helay 74 cod, halka Mahad Nuur Cismaan oo la tartamayey uu helay 24 cod, waxaana halaabay 3 cod. Dr. Saciid wuxuu kasoo jeedaa Dir/Biyomaal/Sacad.
Previous siciid Maxamed cali oo ku guuleystay kursiga Tirsigiisu yahay Hop-093. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Daawo: Xildhibaan Cabdi Shire (Ciyaar Jecel) oo ku dhowaaqay go’aan lama filaan ah